Dowlada Kenya oo ku fashilantay Howlgalkii Westgate ka dib markii la soo bandhigay ragii wareeray westgate halkee ay ka baxsadeen tolow waa halkee daawo video-gan. - iftineducation.com
Dowlada Kenya oo ku fashilantay Howlgalkii Westgate ka dib markii la soo bandhigay ragii wareeray westgate halkee ay ka baxsadeen tolow waa halkee daawo video-gan.
aadan21 / September 29, 2013
iftineducation.com – Kooxdii ka danbeysay weerarkii ka dhacay Magaalada Nairobi ayaa waxaa soo baxaya inay ka baxsadeen goob ay si gaar ah horay ugu sii diyaarsadeen.,video sir ah oo la helay ayaa muujinaya in Kooxda Weerarka qaaday ay sameysteen meel gaar ah oo ay ka baxsadaan.
Baaritaano la sameeyey kadib ayaa la sheegaya in Kooxdu ay u baxsadeen sida raha oo kale, waxaana ayna mareen dhuun biyaha qaada oo aad u yar.
marka aya dhuuta ka baxaan oo ay biyaha dhexmaran ayaa ugu dabeyntii waxay biyuhu geynayaan goob banaan ah sida hada kaaga muuqato sawirka kore.
Arintan ayaa lama filaan ku noqotay hay’adaha amaanka ee Kenya, xili madaxweynaha Kenya uu dhamaadkii Howlgalka Westgate ku dhawaaqay in la qabtay 11 kamid ah kooxdii weerarka soo qaaday 5-na la dilay.
halkaan hoose ka daawo video lagu muujinaayo qaabkii ay u baxsadeen iyo meesha ay mareen.
Sirdoonka Ingiriiska oo Baadi Goobaya 60 Ruux Soomaali oo Xiriir La Leh Al-Shabaab
Wariye Micheal Scott Moore oo wali gacanta ugu jiray koox horay u afduubatay.